२०७५ श्रावण २६ गते न्युज ट्वान्टीफोर टेलिभिजनमा रबि लामिछानेज्यूले होस्ट गर्नु भएको सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा आएको समाचार पश्चात मेरो मनमा स्कुलहरुप्रति संका सृजना भएको छ साथै छोराछोरीको भविष्य प्रति चिन्ता बढेको छ ।
हाम्रो तीन जनाको सानो परिवार छ, हामी ख्रीष्टियन धर्ममा आस्था राख्दछौं। मेरी छोरी यस दाङ्ग जिल्लाको एउटा नाम चलेको मन्टेस्वरी स्कुलमा अहिले कक्षा नर्सरीमा पढ्छिन। स्कुल हिन्दु स्कुल हो वा ख्रीष्टियन स्कुल हो मलाई थाहा छैन, मलाई यति थाह छ कि स्कुल असल शिक्षा दिने, नानीहरुको उज्वल भविष्य निर्माण गर्ने थलो हो।
स्कुल कुनै पनि धर्मको हुदैन भन्ने मेरो बुझाई छ। कुन धर्ममा आस्था राख्ने ब्यक्तिले स्कुल संचालन गरेको हो त्यसको आधारमा स्कुललाई हिन्दु कि ख्रीष्टियन स्कुल भनि परिचय दिनु पनि उचित हुदैन जस्तो मलाई लाग्छ। हिजो आज ख्रीष्टियन धर्ममा आस्था राख्ने ब्यक्तिले गैर सरकारी संस्था संचालन गर्दा ‘यो ख्रीष्टियन संस्था हो’ भन्ने नाम दिईने गरेको पाईएको छ यद्यपि उक्त संस्थाले कुनै धर्म प्रचारको काम गरेको हुदैन तर समुदाय र राष्ट्रको दिगो विकास प्रति समर्पित हुन्छ। हिन्दु धर्म मान्ने ब्यतिmले स्कुल खोल्दैमा त्यो हिन्दु स्कुल, अनि ईसाई धर्म मान्ने ब्यक्तिले खोल्दैमा त्यो ख्रीष्टियन स्कुल हो भन्ने होईन।
मेरी छोरीले येशुलाई ब्यक्तिगत रितिले चिन्न सकुन भन्ने हामी चाहन्छौं र चिनाउने प्रयत्न गरिरहेकाछौं। उनी पढ्ने स्कुलमा हामी ख्रीष्टियन धर्ममा आस्था राख्छौं भनी अवगत गराएकै छौं। तर उनी बेलुका स्कुबाट घर फर्कदा कहिले निधारमा लामो रातो टिका हुन्छ त कहिले “हे भगवान !”, “ऊँ भुर भुवस्वः” जस्ता कुरा सिकेर आउछिन् र कहिले काहिँ त बाटोमा हिड्दै गर्दा मन्दिर देख्यो भने हातले ढोग्न थाल्छिन।। यो एउटा ख्रीष्टियनको लागी पिडादायक विषय हो। यसले हामीलाई सधै पिडा दिई रहेकोछ। स्कुलमा पढ्न पठाएको नानीले गायत्री मन्त्र सिक्दै छ, मूर्तिलाई ढोग्दैछ। अहिलेसम्म मैले यसलाई कसरी लिई रहेको छु भन्दा, सायद यो स्कुल हिन्दु धर्ममा आस्था राख्ने ब्यक्तिले संचालन गर्नु भएको होला अथवा उसको टिचर हिन्दु धर्ममा आस्था राख्नु हुन्छ होला। यो त्यसैको प्रभाव हुन सक्छ। प्रभाव पर्नु स्वभाविकै हो। स्कुलले हिन्दु धर्मको प्रचार गरि रहेको छ भनि मैले रत्ति भर पनि सोचेको छैन।
जब कोटेश्वरस्थित गुड सेफहर्ड स्कुलले विद्यार्थीहरुलाई ख्रीष्टियन बनाई रहेको छ साथै धर्म प्रचार गर्न विद्यार्थिलाई प्रयोग गरि रहेको छ भन्ने खबर सुने, यसले मेरो मनमा स्कुलहरु प्रति संका हालिदिएको छ। कतै मरो छोरी पढ्ने स्कुल पनि हिन्दु धर्मको प्रचार त गरिहेको छैन? कतै उसलाई हिन्दु बनाउने प्रयास त भईरहेको छैन? हैन भने किन उसलाई यी हिन्दु धर्मका कुरा सिकाईदैछ? यदि ख्रीष्टियन टिचर भएका स्कुलबाट धर्म प्रचार हुन्छ भने, हिन्दु टिचर भएका स्कुलबाट पनि धर्मको प्रचार भई रहेको हुन सक्छ। मलाई लाग्छ कि त यस गुड सेफहर्ड स्कुल माथि झुटो आरोप लागाईएको छ, कि मेरो छोरी पढ्ने जस्ता थुप्रै यस्ता स्कुलहरुले पनि हिन्दु धर्मको प्रचार गरि रहेका छन्।
यसलाई हामिले कसरी बुझ्ने त? हिन्दु धर्मको प्रचार हो भनि बुझ्ने या हिन्दु टिचरको प्रभाव हो भनि बुझ्ने? यो हिन्दु धर्मको प्रचार होईन भनौ भने साना नानीलाई गायत्री मन्त्र जप्न सिकाईदै छ र टिका लगाई पुजापाठ गर्न सिकाईदै छ, सरस्वतिको मुर्ति ढोग्न लगाईदैछ। यदि हिन्दु धर्ममा आस्था राख्ने टिचरले पुजापाठ गर्न र मन्त्र जप्न सिकाउदा केहि फरक पर्दैन भने ख्रीष्टियन धर्ममा आस्था राख्ने टिचरले प्रार्थना गर्न सिकाउनु के जघन्य अपराध भयो र?, के यो धर्म प्रचार भयो? यदि अपराध नै हो भने देशमा विद्यमान कानुन बमोजिम दुबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ। हैन भने ख्रीष्टियन हरु माथि अन्याय परेको छ।